Tsy hisy intsony ve ireo sarin’ny solombavambahoaka matory ? Mametra ny zavatra avoakan’ny fampitam-baovao ao amin’ny Parlemanta ao Tasmania ny lalàna vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2018 7:15 GMT
Efitra Fivorian'ny Antenimiera ao Tasmania. Sary avy amin'i Edoddridge. Loharanon-tsary: Wikimedia Commons
Manohitra ny torolàlana momba ny media vaovao navoakan'ny Filohan'ny Antenimiera ao Tasmania Sue Hickey ny mpanao gazety sy ny vondron'ny fampitam-baovao. Tasmania dia nosy mizakatena ao Aostralia any atsimon'ity firenena nosy ity.
Manazava amin'ny antsimpiriany ny zavatra azo havoaka sy voarara ho an'ny mpanao gazety rehefa manao tatitra ao anatin'ny Efitry ny Antenimiera sy ao anatin'ny lapany ilay antontan-taratasy sivy pejy nidaty tamin'ny volana Aogositra 2018. Nilaza ireo vondron'ny fampitam-baovao fa manohintohina ny asany ireo lalàna vaovao ary tsy ahafahany mihitsy mitatitra ny fizotry ny raharaha ao amin'ny Parlemanta.
Ireto ny sasany tamin'ireo fitsipika voatsikera:
Ireo mpanao gazety dia tsy mahazo mihainohaino eny amin'ny manodidina ny Efitry ny Antenimiera, ny Efitry ny Komity, ny trano malalaka anatiny, ny biraon'ny Minisitera, ny efitrano fandraisana na ny efitrano manokan'ny solombavambahoaka ary tsy mahazo miresaka amin'ny solombavambahoaka .
Amin'ny ankapobeny, tokony haka fotoana amin'ny alalan'ny antso an-telefaonina ireo mpikambana amin'ny fampitam-baovao izay maniry ny hiresaka amin'ny solombavambahoaka
Tsy azo atao ny maka sary ireo fizarazarana, ny fikorontanana ao anatin'ny Efitry ny Antenimiera, na ny fitondrantena tsy araka ny maha-parlemanta ataon'ny solombavambahoaka.
Tsy azo atao ny maka sary ny solombavambahoaka tsirairay, izay tsy miresaka amin'ny adihevitra
Tsy azo amboarina, hatsaraina, na ovaina amin'ny endrika hafa ny sary nomerika.
Tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny tatitra mazava sy marina momba ny fizotry ny fivoriana ny sary nalaina ary tsy azo ampiasaina hanaovana fanentanana fifidianana, tsikera na fanesoana, sy dokambarotra.
Mandritra ny 10 minitra voalohany amin'ny Fotoana Fametrahana Fanontaniana ihany no azo alaina ny sary.
Namaritra ilay fitsipika vaovao ho “fanafihana manohintohina indrindra ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny lapan'ny parlemanta” ny Fiombonan'ny Fampitam-baovao, ny Fialamboly sy ny Zavakanto, ny fikambanan'ny mpanao gazety matihanina any Aostralia.
Ny torolalana dia mampiseho ny fanafihana mahery vaika atao amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, manohintohina ny anjara asan'ny fampitam-baovao amin'ny fanaraha-maso ara-dalana ny asan'ireo solontenam-panjakana voafidy, ary manakana ny fampielezana vaovao amin'ny vahoaka ao Tasmania.
Nitsipaka ny torolàlana vaovao ihany koa ny The Mercury, gazety any Tasmania:
… ireo fitsipika ireo dia tsy inona fa fomba iray haingana ho an'ireo olom-boafidy mba hisorohana ny fanaraha-maso rehefa miasa izy ireo ary ireo mpandoa hetra ao anatin'ny rafitra demokratika no mandoa ny karamany ao amin'ny tranobe.
Mihevitra ny hanohy ‘mihainohaino’ ao an-dalantsaran'ny Parlemanta izy ireo na dia eo aza ny fitsipika fandraràna vaovao:
Noho izany dia mikasa ny hanohy hanao izany ihany izahay ho amin'ny tombontsoan'ny demaokrasia malalaka sy ny mangarahara . Raha mikasa ny hampihatra ity fandraràna ity ny Lehiben'ny Parlemanta, dia hiverina aminy izany fanapahan-kevitra izany.
Tao amin'ny Twitter, nanontany ny fitsipika izay mandrara ny fakana sary momba ny ‘fitondrantena tsy mifanaraka amin'ny maha-parlemanta’ ataon'ny parlemantera ilay mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra Australiana Brydon Coverdale.
Mandrara ny fampitam-baovao tsy haka ny “sarin'ny” fitondrantena tsy mifanaraka amin'ny maha-parlemanta ” ny parlemantan'i Tasmania.
Mihevitra ny tenany ho iza ireo mpanao politika ireo? Ny vahoaka no nifidy azy ireo, ary manan-jo hahita ny fomba fitondrantenany ny vahoaka.
Nanamafy ny Lehiben'ny Parlemanta Hickey fa tsy hoe zava-baovao akory ny torolàlana izay navoakan'ny biraony, ary mifanaraka amin'ny fenitra any amin'ny fanjakana parlemantera hafa. Ny sasany amin'ireo parlemantera ihany koa dia voalaza fa tsy faly fa afaka manontany azy ireo mora foana ao amin'ny efitranom-pivoriana ny mpitati-baovao. Saingy nanaiky ny tsikera manohitra ireo torolàlana vaovao ireo i Hickey ary nivoady ny hanontany ny hevitry ny fampitam-baovao momba izany.
Mandritra izany fotoana izany, naka ny sarin'izy ireo ‘mihainohaino’ tao an-dalantsara izay voarara araka ny torolalana ireo mpanao gazety sasantsasany.
Mpanao gazety mihainohaino ao amin'ny parlemantan'i Tasmania. Ny karazana fihetsika ho raran'ny fitsipika vaovao
Namaly ny Lehiben'ny parlemanta Sue ary nanome toky azy ireo fa hanome lanja ny asan'ny fampitam-baovao ny biraony .
Manantena aho fa hihaona aminareo rehetra amin'ny herinandro manaraka mba hahatongavana amin'ny marimaritra iraisana, mankasitraka ny fiaraha-miasa amin'ny fampitam-baovao izahay!